Waxaad dhahdaa, Gaalooy.
Ma caabudayo waxaad caabudaysaan.
Idinna ma caabudaysaan Eebahaan caabudi.
Mana caabudin waxaad caabuddeen,
Idinkuna (hadda) ma caabudaysaan Eebahaan caabudi.
Idinkana Diintiina yaad leedihiin, Anna Diintaydaan leeyahay.
Markuu yimaaddo gargaarkii Eebe iyo Fatxiga (Furashada maka).
Ood aragtid Dadkoo Diinta Eebe u soo gali Kooxo.
U tasbiixso Eebe adoo ku mahadin Dambidhaafna waydiiso illen waa dambidhaaf badanee.
Waxaa khasaaray Gacmihii Abuulahab, halaagmayna.
Waxna uma tarin Xoolihiisii iyo wuxuu kasbadayna.
Haweenaydiisii Qoryaha xambaari jirtayna (waxay gali Naar).
Luqunteedana waxaa la yeeli Xadhig Liif ah.